Horudhac: Tottenham Hotspur vs Liverpool… (Kooxaha Spurs iyo Reds oo mid waliba doonayso inay guul gaarto si ay caawa uga soo muuqato afarta sare ee Premier League) | Radio Balcad
Home WARARKA CIYAARAHA Horudhac: Tottenham Hotspur vs Liverpool… (Kooxaha Spurs iyo Reds oo mid waliba...
Kooxda kubadda cagta Liverpool oo markii hore loo saadaalinayey hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayaa hadda shaki weyn laga galinayaa arrintaas, waxaana ay caawa wajahayaan Tottenham.
Kulankan oo qeyb ka ah horyaalka Premier League Reds booqanaysaa Spurs, iyadoo Macallin Klopp uu doonayo inuu saddexda dhibcood ka soo qaato Jose Mourinho.
Labada kooxood oo muddooyinkii dambe natiijooyin liita la yimid ayaa laga tuuray kaalimaha shanaad iyo Lixaad.
Kooxda martida loo yahay ayaa kulankaan ciyaaraysa kaddib markii ay 4-1 kaga badiyeen Wycombe Wanderers tartanka FA Cup, halka Liverpool ay ku hartay wareegga afaraad ee FA Cup-ka kaddib markii ay guuldarro 3-2 kala soo kulmeen kooxda Manchester United.
Daafaca Tottenham Ben Davies ayaa shaki uu ku jiraa kaddib dhaawac kubka ah oo soo gaaray intii lagu jiray kulankii FA Cup ee Wycombe, halka Matt Doherty isna laga yaabo inuu seego kulankan.
Tababaraha kooxda Tottenham ee Jose Mourinho ayaa si maldahan u sheegay in dhaawacyo dheeri ah ay soo gaareen ciyaartoy aan la magacaabin, waxaana uu xaqiijiyay in Dele Alli uusan diyaar ahayn sababtoo ah waxa uu qabaa dhibaato dhanka jilibka ah.
Kabtanka Liverpool Jordan Henderson ayaa laga yaabaa inuu soo laabto kaddib markii uu dhaawac muruqa ah ku seegay labadii kulan ee ugu dambeeyay kooxdiisa.
Waxa uu ku soo laabtay tababarka buuxa, isaga iyo Joel Matip, kaas oo sidoo kale xaaladdiisa la qiimeyn doono.
Daafaca Matip ayaa seegay kulankii FA Cup ee Axaddii ay guuldarrada ka soo gaartay Manchester United, laakiin taasi waxaa loo maleynayay inay ahayd kaliya taxadar.
>- Liverpool ayaa lix guul oo isku xigta ka gaartay Tottenham tartammada oo dhan, waxaana laga badiyay kaliya hal jeer 18-kii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Waxay guuleysan karaan lix kulan oo isku xigta oo horyaalka ah oo ay la leeyihiin Spurs markii ugu horreysay.
>- Waa markii ugu horreysay oo ay Tottenham iyo Liverpool ku kulmaan maalin khamiis ah horyaalka heerka koowaad, Liverpool ayaa garaacday Spurs maalin kasta oo kale oo ka mid ah isbuuca.
>- Tottenham ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey oo barkood ay ka yimaadeen tartamamda koobabka (6 Guul iyo 2 barbaro).
>- Spurs ayaa haysa 33 dhibcood kaddib 18 kulan oo ay ciyaartay horyaalka, waana in afar ka badan heerkaan oo kale qeybtii hore ee horyaalka dhibcihii ay haysteen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
>- Son Heung-min iyo Harry Kane ayaa labadoodaba u dhaliyay kooxda Tottenham 12 gool oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, midkoodna xiddigaha ay isku kooxda yihiin ma dhalin wax ka badan saddex.
>- Jose Mourinho ayaan laga badinin isagoo tababare ah dhammaan lixdii kulan ee Premier League ee uu gurigiisa kula ciyaaray kooxda markaas difaacanaysa horyaalka (4 Guul iyo 2 barbaro), isagoo guuleystay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Guushii kaliya ee Liverpool gaartay toddobadeedii kulan ee ugu dambeeyay waxay ahayd ciyaar ku tirsanayd koobka FA Cup-ka oo ay la yeelatay kooxda da’yarta ah ee Villa.
>- Reds ayaan gool dhalin horyaalka sanadkan 2021, waxaaa ay ku guuldarreysteen inay shabaqa soo taabtaan afartoodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen horyaalka.
>- Liverpool ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah siddeedii kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League oo ay marti ahaayeen (Away) waxa ay barbaro galeen shan kulan, halka ay guuldarro ka lumen labo kulan.
>- Liverpool ayaa halis ugu jirta inay lumiso ama khasaaro la kulanto kulammo isku xiga horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo 2015-kii, markaasoo ay ka hoos ciyaarayeen tababare Brendan Rodgers.
>- Mohamed Salah ayaa 13-ka gool ku hoggaaminaya gooldhalinta Premier League ee xilli ciyaareedkan, laakiin waxaa dhaaftay shan kulan oo horyaalka ah isagoo aan wax gool ah ku darin.
>- Roberto Firmino ayaa dhaliyey afar gool shantiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu horyaalka Premier League ku wajahay Spurs, isagoo ka dhaliyey goolka guusha saddex ka mid ah kulammadaas.
Previous articleItoobiya oo xirtay hoggaamiyeyaal ka tirsan Jabhadda Tigray-ga
Next articleRio Ferdinand oo weerar culus ku qaaday xiddigaha Man United, kaddib guuldarradii Sheffield United
AKHRISO:-5-kii Saxiix Ee Ay Sameeyeen Kooxaha Waaweyn Ee Yurub Intii Uu...
HORDHACA:- Liverpool Vs Manchester United Kulan ka Tirsan Horyaalka England